बैंक जाँदै हुनुहुन्छ ? बैंकमै गर्न सकिन्छ, बीमा – Beema News
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०७४, शुक्रबार १०:३१
साउन २०, काठमाडौं÷ बीमा गराउने सोचिरहनु भएको छ ? तर बीमा कम्पनीसम्म जान भ्याउनु भएको छैन् अथवा बीमा एजेण्ट भेटाउनु भएको छैन् ? त्यसो हो भने अब तपाईका लागि सहज हुने भएको छ । हामी सबै कुनै न कुनै कामले बैंक सम्म त पुग्ने गर्छौ नै, बैंकमा पुगेको समयमा नै बीमा गर्न पनि सकिने भएको छ । अर्थात अब बीमा गर्न एजेण्ट र बीमा कम्पनी गईरहनु पर्दैन बैंकमा पनि बीमा गर्न सकिने भएको छ ।
यी बैंकमा गर्न सकिन्छ बीमा
कुल ५८ वटा शाखा रहेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनले पहिलो पटक बैंकाइन्सुरेन्स सेवा सुरु गरेको छ । गत बैशाख देखि सिटिजन्स बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच सम्झौता भएपछि बैंकका ग्राहकले बैक मै बीमा गर्न सक्नेछन् ।
बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको कुनैपनि शाखाबाट बैंकिङ्ग सेवाका अतिरित्त आफ्नो जीवन बीमा गर्न र सोको प्रिमियम रकम छिटो, छरितो र सहज रुपमा बुझाउन, बीमा लेख लिन, दावी भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बीमा सेवा लिन सकिने व्यवास्था गरेको छ ।
बैंकबाट एनबी इन्स्योरेन्सको सेवा पनि प्राप्त गर्न सकिने छ । सिटिजन्स बैंकका सेवाग्राहीले मुलुकभर रहेका सिटिजन्स बैंकका शाखाहरुबाट एनबी इन्सुरेन्सका निर्जीवन बीमा र सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा सेवा लिन सक्ने छन् ।
यस्तै प्रभु बैंकबाट सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको बीमा सुविधा लिन सकिने छ । बैंकले गत फागुन २७ गतेबाट आफ्ना सम्पूर्ण शाखाहरुबाट सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
३.प्राईम कर्मशियल बैंक
जीवन बीमालाई धेरै भन्दा धेरै ग्राहकको पहुँचसम्म पु¥याउने उद्धेश्यले प्राइम कर्मशियल बैकले एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी संग बैकासुरेन्स संझौता गरेको छ । प्राइम कर्मशियल बैंकका नेपाल भर रहेका ५५ वटा शाखा कार्यालयहरुबाट एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमा योजनाहरु तथा बीमा सेवाहरु लिन सकिने छ ।
४.बैंक अफ काठमाण्डू
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडबाट सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमा सेवाहरु लिन सकिने छ । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेड र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच भएको बैंकासुरेन्स भएको सम्झौता अनुसार बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गरिने छ ।
५.सनराईज बैंक लिमिटेड
सनराईज बैंक लिमिटेडले पनि आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुलाई सुविधा पुगोस भनेर शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संगको सहकार्यमा बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा सुविधा संञ्चालन गरेको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परी कुनै बचतकर्ताको मृत्यु भएमा वा स्थायी अशक्तता भएमा ५ लाखमा नबढ्ने गरी बचत खातामा रहेको मौज्दातको चार गुणासम्म रकम प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
यि बैंकहरु बाहेक अन्य बैंकहरुवाट पनि बैंकासुरेन्स सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ् । विभिन्न बैक तथा बीमा कम्पनीहरुको सहकार्यमा बैंकासुरेन्सको कार्यक्रमहरु संञ्चालन हुदै आइरहेको छ ।
बीमा व्यवसायको क्षेत्र विस्तार हुदै जाने क्रममा बैकहरुको सहकार्यमा बीमा कम्पनीहरुले बैंकका ग्राहकहरुलाई बैंकमै बीमाको सुबिधा दिन थालेका हुन् । विश्व बजारमा बैंकासुरेन्स निकै पहिलो प्रचलनमा आएको भए पनि नेपालमा भने भर्खरै सुरुवात भएको छ । बैंकले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दैे बीमा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भएकाले बीमा व्यवसायको विस्तारमा बैकासुरेन्सले थप योगदान दिने बीमा कम्पनीहरुको विश्वास रहेको छ ।